ပရိသတ်ကို ဂစ်တာလက်ဆောင် ပေးခဲ့တဲ့ ကိတ်အာဘန် - Yangon Media Group
ပရိသတ်ကို ဂစ်တာလက်ဆောင် ပေးခဲ့တဲ့ ကိတ်အာဘန်
လန်ဒန်၊ မတ် ၁ဝ
ကမ္ဘာကျော်ကန်းထရီးအဆိုတော် ကိတ်အာဘန်က လန်ဒန် ဖျော်ဖြေပွဲအပြီးမှာ သူရဲ့ပရိသတ်တစ်ဦးကို ဂစ်တာလက်ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်း CNN သတင်းအရ သိရပါတယ်။ ကိတ်အာဘန်က ဒီဂစ်တာမှာ သူ့လက်မှတ်ထိုးပြီး သူ့ရဲ့အမာခံပရိသတ်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ နက်ရ်ှဗီးဒေသက အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို ဖျော်ဖြေပွဲစင်မြင့်ပေါ် ဖိတ်ခေါ်ပြီး ဒီလက်ဆောင်ကို ပေးခဲ့တာပါ။ အသက် (၅၁) နှစ်အရွယ်ရှိ ပြီဖြစ်တဲ့ ကိတ်ဟာ ဒီလန်ဒန်ဖျော် ဖြေပွဲအပြီးမှာ ပရိသတ်တွေကို အံ့အားသင့်စဖွယ် ပါဖောမန့်လုပ် ဆောင်ပေးဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကာ ဒီပရိသတ်အမျိုးသမီးက ကံကောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ကိတ်က လက်ဆောင်မပေးခင် စင်မြင့်ပေါ်မှနေ၍ သူ့ပရိသတ်ကို ”ကျွန်တော့်ပရိသတ်တွေကို အသုံဝင်မယ့် လက်ဆောင်တစ်ခုခု ပေးချင်ပါတယ်၊ ဒါဟာ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့ ဘုရားကျောင်းတက်ချိန်တွေမှာလည်း ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ အသုံးဝင်မယ့်ဟာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်”ဟု အရိပ်အြ>ွမက်ပြောပြီးကာမှ လက်ဆောင်ပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိတ်ဟာ အခုသူရဲ့ ဂီတရှိုးဖျော်ဖြေမှုကို နက်ရ်ှဗီးဒေသမှစပြီး အမေရိကန်နဲ့ ဥရောပတစ်ခွင် လှည့်လည်ဖျော်ဖြေသွားမှာဖြစ်ပြီး သြစတြေးလျမှာတော့ ” Graffiti U ” အမည်ရှိ ဂီတဖျော်ဖြေပွဲကို ဂန္ထဝင်သီချင်းတွေရော သီချင်းသစ်တွေကိုပါ ထည့်သွင်းဖျော်ဖြေသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိတ်က ”ခင်ဗျားအနေနဲ့ အောင်မြင်တဲ့ သီချင်းတွေကို ဆိုနိုင်ရင်တော့ အတွေ့အကြုံရှိတဲ့သူဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေရှိလာမယ်ဆိုရင်တော့ ဒါဟာ ခင်ဗျားရဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ဖြစ်သွားပါပြီ။ ဒါကြောင့် အမြဲအသစ်တွေကို ရှာဖွေနေရမယ်။ သင်ယူနေရမယ်၊ ကြိုးစားနေရမှာ ဖြစ်တယ်”ဟု လန်ဒန်ဂီတဖျော်ဖြေ ပွဲအပြီး အင်တာဗျူးမှာ ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ ကိတ်အာဘန်သည် ၁၉၆၇ ခုနှစ် အောက်တိုဘာတွင် နယူးဇီလန်၌ မွေးဖွားခဲ့သည့် သြစတြေးလျလူမျိုး အဆိုတော်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ဇနီးသည်မှာ နာမည်ကျော်သရုပ်ဆောင် နစ်ကိုးကစ်မင်းဖြစ်သည်။
လူဒါရဲ့ မဖွယ်မရာနေရာကို ကိုင်တွယ်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသားနောက်ခံ အကသမားကို ပရိသတ်တွေက အပြစ်တင်ဝေဖ
အာရှလမ်းမပေါ် ပရိုဘောက်ယာဉ်ဘရိတ်ပေါက်ပြီး ကုန်တင်ကားကိုဝင်တိုက်၊ တစ်ဦး စိုးရိမ်ရ
တစ်သန်းခွဲခန့်ရှိသော ကလေးအလုပ်သမား လျော့နည်းပပျောက်ရေး အစိုးရအနေဖြင့် မဖြစ်မနေ ပူးပေါင်း?
‘ကာရိုက်တာတိုင်း ဇာတ်လမ်းတိုင်းကို သစ္စာရှိပြီး အကောင်းဆုံး ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်မျိုးပဲ ??